JINGHPAW KASA: ဗမာတင့်တပ်ကို မိုင်းဗုံးများဖြင့်တိုက်ခိုက်
ဒီဇင်ဘာ (၂၂) စနေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) လက်အောက်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၅) ဒေသဖြစ်သော အူထန်းယန်ရွာအနီးတွင် မိုးမောက်ဘက်မှ ချီတက်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် တင့်ကား အဖွဲ့ကို ဒီဇင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၄း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ မိုင်းဗုံးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သရှိရပါသည်။ ဤသို့ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ မိုင်းဗုံးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာ ဗမာအစိုးရ စစ်ကားများ ပျက်စီးသွားပြီး၊ စစ်သား အများအပြားလည်း ဒဏ်ရာရရှိ သွားကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
Some Burmese light tanks were destroyed near U Htang village, which is under KIA (25) battalion area and KIA (5th) Brigade region on 20th December according to the KIA front line officer report. At 04:00 PM on that day the Burmese Government light tank troops were coming from Mo Mawk to Laiza, thus KIA used remote controlled mine to prevent the KIA region. Many soldiers were injured and many tanks were destroyed.
Also visit my web-site - hcg diet for men results
ုko myo said...
ဟုတ် မဟုတ် မင်းသွားကြည့်ပါလား သေချာအောင် ငါလည်းမသိဘူး
ပေါက်ကရ သတင်းတွေ လျောက်လွင့်နေပါတယ် ဗျို့ ။ မယုံဘူး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြ ။ ဒီဘလော့ ပိုင်ရှင်က တစ်လကို လစာဘယ်လောက်ရလဲ မသိဘူးနော် ။စီးပွားမလုပ်ပဲ ပြည်ဖျက်မဲ့ သတင်းတွေ တင်ပြီး လစာရတယ်ထင်တယ် ။ လွင့်တဲ့သင်တင်းကလဲ ပါးစပ်ထဲရှိတာတွေ လျောက်ပြောနေတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ဖို့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ မွန်မြတ်ပါပေတယ် ။ တစ်နိုင်ငံလုံး တိုးတတ်ဖို့ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား။ အဲလို တိုးတတ်ဖို့ဆိုတာက နည်းပညာ မြင့်မားအောင် ကြိုးစားရမယ်။ အတန်းပညာ သင်ရမယ်။ တောထဲမှာ နေပြီးတော့ သေနတ်ပစ် သင်ပြီး ဓါးမြတိုက် လိုက် မိုင်းထောင် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်နေရုံနဲ့တော့ ငါ့တို့နိုင်ငံကြီး မတိုးတတ်ဘူး ။ အမှန်တကယ် တိုးတတ်စေချင်ရင် အစိုးရက စေတနာနဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ ရထားလမ်းတွေ ရေကာတာတွေ ဖျက်စီးစရာမလိုပါဘူး ။ အဲလိုလုပ်တာက တိုးတတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ။ ဆုတ်ယုတ်ဖို့ ဖြစ်နေတယ် ။ ကချင် ဗမာ ရှမ်း ခွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ ငါတို့နိုင်ငံ တိုးတတ်ဖို့ လမ်းမမြင်ဘူး ။ ကချင်လူမျိုးလည်း တကယ်တော် တကယ်တတ်နေရင် နိုင်ငံတော်က တင်မဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာကပါ အသိမှတ်ပြုလိမ့်မယ်။ လူသတ် မိုင်းထောင် အဖျက်စီးလုပ်ငန်းတွေကို ပြောတာ မဟြုတ်ဘူးနော် ။ အလင်းဝင်ပါ ။ မိသားစု စားဖို့ သောက်ဖို့ ပိုက်ဆံ ဝင်ငွေကို ဘိန်းစားအလုပ် မိုင်းထောင် အလုပ်နဲ့ မှောင်ခို အလုပ်နဲ့ ဝင်ငွေမရှာပါနဲ့ ။ အလင်းဝင်ပါ။